Taranaka 4 an'ny System Heating Brew System-News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Maherin'ny 95% ny vokatra COFF manondrana any ivelany
Rahoviana no ilaina ny tanky labiera brite
Fotoana: 2021-10-12 Comment: 2
The first Oil Heating Brewhouse System dia noforonina in 2017, for which we have got the certificate of patent ( Certificate No. ZL 2018 2 1498858.5). Compared with traditional steam and electric heating, it has the advantages:
Efitsitsiana nergie: lany herinaratra betsaka latsaky ny fanafanana etona satria ny menaka dia ampiasaina amin'ny bisikileta, izay andoavana indray mandeha isan-taona.
Fahombiazana avo kokoa
Famaritana ny hafanan'ny solika: 150℃~ 170℃:
Avy amin'ny 28℃ ho 60℃, fotoana fanamafisana: 30min;
Avy amin'ny 60℃ ho 80℃, fotoana fanamafisana: 20min;
Avy amin'ny 80℃ ho 100℃, fotoana fanamafisana: 30min;
Ufanamaintanana niform miaraka amn'ny fangotrahana avo lenta kokoa sy ny fahombiazan'ny coagulative tsara kokoa, ialana tsara amin'ny ampahany amin'ny fandrahoan-tsakafo vokatry ny afo mivantana na ny fanafanana elektrika;
Skid- nitaingina,fametrahana mety,mitahiry toerana bebe kokoa;
Sfanafanana miaraka of samy tuns.
Ny menaka dia azo antoka sy tontolo iainana satria ampiasaina amin'ny radiator hafanana.
Next: Kalitao Voalohany
Maherin'ny 95% amin'ny Prod an'ny COFF ...